Ogaden News Agency (ONA) – Ciidamo kasoo goostay Liyuu Poliska Ciidanka Gumeysiga Itoobiya
Ciidamo kasoo goostay Liyuu Poliska Ciidanka Gumeysiga Itoobiya
Baxsiga ciidamada Liyuu polsika ayaa noqday mid maalinla ah kadib markii jabhada wadaniga xoreynta Ogadeniya ay siisay cafis qofkasta oo kamid ah ciidamada Somalida ah ee Liyu poliska ee gumeysiga Ethiopia qortay si ay gumaad uga geystaan dhulka Ogadeniya.
Sawirkaas kore waxa weeye ciidamo kamid ah liyuu poliska oo hada soo gaadhay Ciidanka ONLF islamarkaasna weydiistay cafis. Sarkaal kamid ah Ciidanka ONLF ee qaabilay Askartan kaso goostay Liyuu Poliska Ciidamada Ethiopia ayaa noo sheegay in Ciidankan isugu jireen askar iyo masuuliyiin darajo kala gadisan ka hayay Liyu Poliska. Waxaa kamid ah oo kale askratan Soo goosatay hoggaamiyaal heystay qeybo kamid ah Ciidamada Liyuuu Poliska.
Waxaa la socday ciidanka soo goostay ee hawaarinta askar ka soo baxsatay ciidanka ay ugu yeedhaan federaalka Itobiya oo qaarkood ay ka muuqdaan sawirkan, kuwaasoo aan tafatir dheeraad ah ka bixin doono.
Ciidamada Liyuu Poliska ee soo gaadha Jabhada ONLF iyo kuwa kale ee ka soo goosta ciidanka Federaalka Itobiya ayaa markiiba laga dhiggaa hubka. Qaar badan waxay ku biiraan N/hurayaasha CWXO, inta soo hadha waxaana laguda galaa sidii loo badbaadin lahaa iyaga oo intooda badan qofkastaba wadanka uu sheegto si nabad galyo ah lagu geeyo si uu uga badbaado gumeysiga Ethiopia.